Agba agba agba iri na ise (14K) - Popular Jewelry
Tri-Agba iri okpukpu pendant (14K)
Nke a mara mma 14 Karat gold tri-agba okpueze pendant atụmatụ a rose gold "15" na-eme ka a zuru okè ngwa n'ihi na nnukwu quinceañera ụbọchị! onyinye dị ukwuu nye nwa gị nwanyị ụbọchị dị mkpa!
Ahịa Dị Oké Ọnụ Ahịa: 14 Karat Tri-Tone Gold.
Na okirikiri: Mee.
Kpọtụrụ anyị maka ịdị na Diamonds
Ogbe: 20 mm.
Ogo: 23.30 mm.
Ikike dịnụ: ~ 1.8 gram *.